Kenya” Alshabaab waxa ay dileen dagaalamayaal kenya u dhashay oo shabaab ku biiray inta u dhaxeysa bilihii …..” | Kismaayo24 News Agency
Kenya” Alshabaab waxa ay dileen dagaalamayaal kenya u dhashay oo shabaab ku biiray inta u dhaxeysa bilihii …..”
Tuesday May 2, 2017 - 1:38 under Somali News by Tifaftiraha K24
Dhalinyarada kenyaanka ah ee ku biira alshabaab waala dilaa iyadoo lagu eedeynaayo basaasnimo sida ay sheegtay dowladda kenya.
Afhayeen u hadlay dowladda kenya ayaa sheegay in alshabaab ay dilaan dhalinyarada u dhashay kenya ee iyaga u dagaalama waxaana uu uga digay muwaadiniinta kenyaanka ah in ay ku biiraan alshabaab.
Madaxa Howlgalka Linda Boni ninka lagu magacaabo James Ole Seriani oo warbaahinta kula hadlaayay hotel lagu magacaabo Mwana Arafa ee magaalada Lamu ayaa sheegay in ay la socdaan xogta dhalinyarada kenya u dhashay ee shabaab ku biiray isagoo intaa ku daray in mudo 2 sano gudaheed ay shabaab dilee 6 dagaalame oo kenya u dhashay kuwaasi oo shabaab ay ku eedeeyen in dowladda kenya ay u basaaseen mudadii ay shabaabka ku jireen.
” Waxaan xog ku helnay in uga yaraan lix dhalinyaro ah oo u dhashay kenya kuna biiray alshabaab lagu dilay soomalia inta u dhaxeysa bilihii March iyo April ee sanadkaan” ayuu yiri madaxa howlgallada.
” Badankood dhalinyaraadan shabaab kalsooni kuma qabaan waxaana ay u heystaa in basaasiin ay u yihiin dowladda kenya waana sababta loo dilaayo dhalinyarada kenyaan ah ee shabaab ku biira waxaana markasto dhalinyaradeena uga dignaa in aysan shabaab ku biirin Wax aan geeri ahayn kama helaysaan Somalia” ayuu hadalkii raaciyay James Ole Seriani.
Alshabaab ayaa dhowr jeer dil ku fulisay dagaalamayaal ajaanib ah oo u dhashay kenya iyo wadamo kale oo shabaab ka bar bar dagaalama kuwaasi oo alshabaab ay ku eedeeyeen in jawaasiis ay u noqdeen wadamadii ay u dhasheen oo markii hore shabaabka uga soo safreen.